गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण - नेपालबहस
गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण
| १३:३८:३७ मा प्रकाशित
२२ चैत,डोटी । स्थानीय तह गठन भएदेखि भाडाको घर छाडेर दुई गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेका छन् । पछिल्लो समय जोरायल र बडिकेदार गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न थालेका छन् ।
नागरिकलाई आफ्नै भवनबाट सेवा दिनका लागि उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो भवन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिई काम सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । जोरायलको पक्की भवन निर्माण गरिको छ भने बडिकेदारको ‘प्रिफ्याब’ भवन निर्माण गरिएको छ ।
बडिकेदारको भवन कुल रु ७० लाखको लागतमा ‘प्रिफ्याब’ मोडलमा भवन निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ बनेको भवनमा सभा हल, सबै विषयत शाखा अटाउने कार्यकक्ष, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्षसहित २२ कोठाको भवन निर्माण गरिएको हो । उक्त भवनको निर्माण एस।एस। कन्सट्रक्सन दिपायलले गरेको हो । आफ्नै भवन निर्माण भएपछि नागरिकलाइ एक छाना मुनीबाट सेवा दिन निकै सहज भएको बडिकेदारका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बताए ।
यसैगरी जोरायलले पनि कुल रु दुई करोड तीन लाखमा १४ कोठाको आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नयाँ बनेको भवनमा सभाहल, सबै विषयत शाखाका कार्यकक्ष, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष निर्माण गरिएका छन् । उक्त भवन थानी कन्सट्रक्सन काठमाडौंले निर्माण गरेको हो ।
भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय ४ हप्ता पहिले
संस्कृत विद्यापीठमा पुस्तकालय र प्रशासनिक भवन निर्माण ४ हप्ता पहिले
नेपाल वंशज सांस्कृतिक भवन निर्माण हुने १ महिना पहिले
आगामी वैशाखभित्र आफ्नै भवन बनाउदै गाउँपालिका १ महिना पहिले
आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउदै गाउँपालिका १ महिना पहिले
लोकसंस्कृति उत्थानका लागि ठाडो भाका प्रतियोगिता १३ घण्टा पहिले
परम्परागत मौलिक राधाकृष्ण नाच प्रस्तुत गर्दै कलाकार १३ घण्टा पहिले
एक सातामा १२४ प्रजातिका चरा भेटिए १४ घण्टा पहिले
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ अर्को साता नेप्सेमा सूचीकृत हुने, कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ? १८ घण्टा पहिले
आज राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा देखिने १७ घण्टा पहिले
प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा गरियाे मौलो पूजा ३ दिन पहिले
नगरभित्रका कोरोना पोजेटिभलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा १५ घण्टा पहिले
नेपालले दियाे नेदरल्यान्डस्लाई विशाल लक्ष्य २ दिन पहिले
अन्नपूर्ण प्रथममा नेपाली महिलाको पहिलो पाइला ६ दिन पहिले
सकियो विमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक ३ हप्ता पहिले
साहित्य सर्जकका लागि उर्वर भूमि लुम्ले गाउँ ३ हप्ता पहिले
विद्यालयमा पढाइ नभएको भन्दै विद्यार्थीले गरे तालाबन्दी ३ हप्ता पहिले
करीब २४० वर्ष पुरानो कलात्मक इँटा फेला ३ हप्ता पहिले
ग्वाङ्जाओ उडान निश्चित भएपछि निगमलाई ठूलो सफलता १ वर्ष पहिले
किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भ बोकाएको आरोपमा एक जना नियन्त्रणमा १ महिना पहिले
कता हराए प्रचण्ड ? ३ महिना पहिले
ट्र्याक्टर दुर्घटनामा बालिकाको मृत्यु, एक जना घाइते १० महिना पहिले